Uncategorized Archive - EGO LEGO MEGA IGBO LEGO
400W LED Beam Spot Wet 3IN1 Na-agagharị Ìhè na CMY
260W 9R Beam Plus Na-akpụ akpụ Isi Light
28x25W Igwe Ọkụ Ntọgharị ZOOM Na-enwu Isi
Ezigbo ndị ahịa na ndị enyi, Ndewo onye ọ bụla, iji mee ka ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ ahụ bulie ngwa ngwa, guzosie ihe eji ere ahia, melite mmetụta ika na asọmpi, ma welie mmetụta a na-ahụ anya nke ika LOGO, ụlọ ọrụ anyị chepụtara ma debanye aha LOGO ọhụrụ. Ngosiputa ohuru ohuru nke ika a bu LOGO ka aga amalite ugbua, ụlọ ọrụ mbụ ahụ bụ LOGO…
Daalụ maka itinye uche gị na ebe nrụọrụ weebụ MEGA PRO LITES. Maka ahụmịhe ọrụ ka mma, a ga-atụgharịrị ma webata ebe nrụọrụ weebụ MEGA PRO ma kwalite ugbu a. E tinyeghị ụfọdụ ngwaahịa ngwaahịa n'oge n'oge mmelite, nke butere nsogbu enweghi ike iju ajuju gi, Biko gbaghara m! EGO LEGO MEGA IGBO LEGO 2020.04.18
1. Lampdị iche iche na-achịkwa oriọna Spotlight, laghachi n’ọkụ, Ihu igwe na mbara igwe, nghọta, wdg. A na-achịkwa okpokoro okpokoro; Kọmputa oriọna kọmputa ya na oriọna ya na -eme ka ihe eji esiji; Gbanwee agba agba atọ dị nro (ọkụ oyi) a na-achịkwa site na tebụl mbelata; Igwe anaghị agbazi agba atọ dị nro (ọkụ oyi) site na oyi na-achịkwa ...
E kewara ọkụ onyonyo na mbara elu, ntị ntị, elu ọkụ, kọlụm, akụkụ dị mma, ahịrị elu-igwe na ụwa, ọkụ ụkwụ, wdg. dị ka okirikiri nhọrọ ukwuu na ojiji. A na-etinye ọkụ n'elu, tumadi na mpaghara arụmọrụ n'ihu nke ogbo ahụ, na-eme ka ọnụ ọgụgụ ahụ pụta ìhè ma ọ bụ na-egosipụta mmetụta atọ nke ihe ...
Mgbanwe mgbanwe ọkụ na-agba ọkụ na ọkwa, na nkenke, bụ oge ntụgharị ọkụ. Na usoro nyocha nile nke sayensi banyere ikpo ọkụ, na mgbakwunye na ilebara anya banyere mgbanwe mgbanwe ọkụ ọkụ, Anyị kwesịrị ị morea ntị karịa na ijikọ mmalite na njedebe nke ihe omume ọ bụla nke ọkwa mgbanwe ọkụ a, na uche…
Mega LED Lighting Ltd., guzobere na 2006, bụ ụlọ ọrụ na-eweta ọkụ na teknụzụ dị elu nke ijikọ R&D, n'ichepụta, na ahia. Ntọala nrụpụta na-ekpuchi mpaghara nke 5,000 square, ya na ulo oru abuo na ulo oru ihe omumu, otu nnukwu ụlọ ihe nkiri, 6 ahịrị nnwale ......
Guangdong ICP Nke 14030531
Tẹ:+86-20-37294926 / 37294936
Email:zụọ ahị[email protected]
No.9, ngzọ Dayang,Obodo Mingzu,Obodo Tanbu, Mpaghara Huadu, Obodo Guangzhou,China.